नेकपाका ६५ जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँड, कसले कति पाउने ? – Everest Dainik – News from Nepal
नेकपाका ६५ जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँड, कसले कति पाउने ?
काठमाडौं, भदौ ७ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ६५ जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँड भएको छ । प्रदेश र जिल्ला एकीकरणका लागि गठित कार्यदलहरूले बुधबारसम्म ती जिल्लामा नेतृत्व बाँडफाँड गरेका हुन् । ६५ मध्ये पूर्वएमालेले ३९ र पूर्वमाओवादीले २५ जिल्ला अध्यक्ष पाउने गरी कार्यदलहरूले प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा भने विनासहमति नेतृत्व सिफारिस भएको छ । ११ वटै जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै नाम केन्द्रीय सचिवालयमा सिफारिस भएको हो । ३ नम्बर प्रदेशमा १३ भूगोल जिल्ला र ४ विशेष जिल्ला कमिटीको नाम एकीकरण कार्यदलले सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ ।
१७ जिल्लाको नेतृत्व टुंगिन बाँकी
नेकपामा ७७ वटा भूगोल र ४ विशेष जिल्ला कमिटी छन् । तीमध्ये १७ वटा जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँड टुंगिन सकेको छैन । प्रदेश १ मा ३, प्रदेश २ मा १, गण्डकी प्रदेशका ११ र कर्णाली प्रदेशका २ जिल्लाको नेतृत्व कसले पाउने कार्यदलले अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन । यद्यपि, कर्णाली प्रदेशको कालिकोट पूर्वमाओवादी र मुगु पूर्वएमालेले लिने गरी अन्तिम समझदारी हुन लागेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
एकीकरण कार्यदललाई आज अन्तिम समयसीमा
नेकपाले एकीकरण कार्यदललाई आजसम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्न अन्तिम समयसीमा तोकेको छ । कार्यदल तहमा टुंगो नलागेका जिल्ला र प्रदेशहरूको हकमा जस्ताको तस्तै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने निर्णय भइसकेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार प्रदेश र जनसंगठन एकीकरणका लागि बनेका सबै कार्यदलले बेलुकीसम्म महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नेछन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: ६५ जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँड, nekapa, नेतृत्व बाँडफाँड